Michelle Williams ga -abụ Janis Joplin na akụkọ ndụ onye ọbụ abụ | Nye m oge ntụrụndụ
Michelle Williams ga -abụ Janis Joplin na akụkọ ndụ onye ọbụ abụ
Michelle Williams na -achọ imechi mkparịta ụka maka kpọọ Janis Joplin na biopic nke ga -amalite ịdekọ gbasara onye ọbụ abụ. Sean Durkin ga -eduzi ihe nkiri a, onye na 2011 duziri "Martha Marcy May Marlene" nke ọma, nke Joplin n'onwe ya gosipụtara ọtụtụ egwu na ụda ụda ya.
The omee ama ama nke ọma mgbe gbara Marilyn Monroe na "My Week with Marilyn", ọrụ nke o jiri nweta nhọpụta Oscar wee merie Golden Globe na ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ. Site n'ọrụ ọhụrụ ya, "Manchester n'akụkụ Oké Osimiri", ọ na -eme nyocha dị egwu, ọkachasị na ememme ihe nkiri London na nso nso a.
1 Ọnye na -bụ Janis Joplin?
2 Michelle Williams dị ka Janis Joplin
Ọnye na -bụ Janis Joplin?
Michelle Williams ga -abanye ugbu a na akpụkpọ ụkwụ Janis Joplin, onye na -agụ egwu na onye na -agụ egwu na onye nwere olu siri ike wee tụgharịa egwu ọ bụla n'ike. Ọ ghọrọ onye ama ama na 60, nke mbụ dị ka akụkụ nke Big Brother na Holding Company band na emesịa dị ka onye na -ese ihe nkiri. Ndụ juputara na mmetụta dị ike nke kwụsịrị mgbe ọ dị naanị afọ 27 n'ihi a nnyefe nke heroin.
Michelle Williams dị ka Janis Joplin
Tupu Michelle Williams ọ dị ka onye na -emepụta ihe ahụ na -asọgharị Amy Adams na Zooey Deschanel, mana obi abụọ adịghị ya na nke a, ha na -akụ aka nke ukwuu na onye na -eme ihe nkiri nke dabara n'ụzọ zuru oke. Na agbanyeghị, oru ngo a enwela ọtụtụ nsogbu n'ihi esemokwu iwu, mana ka anyị nwee olile anya na enwere ike mechaa ya wee nwee ọmarịcha arụmọrụ ọzọ nke onye na -eme ihe nkiri na -ejighị ya kpọrọ ihe.
Ihe karịrị ihe nkiri 30 na 3 Nhọpụta Oscar dị ka onye na-eme ihe nkiri kacha mma, ha na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ọrụ Michelle Williams, ọrụ Janis Joplin bụ ọrụ nwere ike idobe ya ọzọ n'etiti ndị ga-eme ntuli aka iji nweta ihe oyiyi ọla edo a na-atụ anya ya kemgbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ndị na -eme ihe nkiri » Michelle Williams ga -abụ Janis Joplin na akụkọ ndụ onye ọbụ abụ
Ọ fọrọ nke nta ka emechaa: album ọhụrụ Melendi dị ebe a
Mbụ na nyocha nke "Akaụntụ", ya na Ben Affleck